ओली सरकारका मन्त्री भन्छन्– सरकारले ८ महिनामा इतिहासमै सम्झनलायक काम गरेको छ « GDP Nepal
ओली सरकारका मन्त्री भन्छन्– सरकारले ८ महिनामा इतिहासमै सम्झनलायक काम गरेको छ
काठमाडौं । सरकारको कामको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा एक मन्त्रीले भने सरकारले सरकार गठनको ८ महिनामा इतिहासमै सम्झनलायक काम गरेको दावी गर्छन् ।
सिन्डिकेट अन्त्य कागजमा मात्रै भएको, साढे ३३ किलो सुनकान्डका अभियुक्त पत्ता लगाउन नसकेको, निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अभियुक्त पत्ता लगाउन नसकेको तथा डा. गोविन्द केसीसँगको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आलोचित सरकारका मन्त्रीहरु नै प्रतिरक्षामा उत्रेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ८ महिनामा इतिहासमै सम्झना हुने कामहरु भएको जिकिर गरेका हुन् ।
राजधानीमा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री महासेठले भने– सरकार गठन हुनुपुर्व मुलुकमा एकात्मक शासन प्रणाली थियो । तर, हामी आएपछि संघात्मक प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । यस्तै, स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारलाई आवश्यक कानुनहरु बनाउने काम हामीले गरेका छौं ।
महासेठले ६ महिनामै सबै पूरा नहुने भन्दै भने– चीनलाई पनि अहिलेको यो अवस्थामा आईपुग्न ४२÷४३ वर्ष लाग्यो । साईप्रसलाईपनि अहिलेको अवस्थामा आईपुग्न ३५ देखि ४० वर्षसम्म लाग्यो । मलेसियालाई त्यस्तै १८ देखि २० वर्षसम्म लाग्यो । हामीले पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरु ५ वर्षभित्र पूरा गरेर देखाउँछौं । अहिले ६ महिनाभित्रै सबै पूरा हुने कुरा होईन् । केही समय लाग्छ ।
मन्त्रीले सपना बाँड्न भने छाडेका छैनन् । भन्छन्– अबको पाँच वर्षभित्र वर्तमान सरकारले कसैले नसोचेको प्रगति र विकास गरेर देखाईदिनेछ । जनतासामू गरेका सबै प्रतिबद्धताहरु हामी पूरा गरेर छाड्छौं । आउने दश वर्षभित्र त नेपाल कहाँबाट कहाँ पुग्छ ? कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।
उनले विकासको दृष्टिकोणमा आफूहरुले धेरै नयाँ–नयाँ योजनाहरु ल्याएकोपनि दाबी गरे । महासेठले भने– विकासको काममा हामीले धेरै फड्को मारेका छौं । १२ सय किलोमिटरको मदन भण्डारी राजमार्गको काम हामीले सुरु गरिसकेका छौं । अहिलेसम्म २२ वर्षदेखि बनाउन नसकेको हुलाकी राजमार्ग यो तीन वर्षभित्रमा हामी पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न गैरहेका छौं ।
त्यस्तै महेन्द्र राजमार्ग बनेकोदेखि अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा रहेपनि आफूहरु आएपछि चार लेन बनाउने काम भैरहेको उनले जनाए । महासेठले थपे– अहिले धमाधम काम भैरहेको छ। महेन्द्र राजमार्गलाई मेची–महाकालीसम्म चार लेन बनाउनेगरि काम सुरु गरिसकेका छौं । बुटवलबाट काम सुरु भैसकेको छ । अब कमलाबाट पनि सुरु गर्न गैरहेका छौं । र, आगामी चुनावसम्म यो राजमार्ग चार लेन बन्छ । म दाबाका साथ भन्छु ।